Warshadda slurry & tubbo warshad | Shiinaha slurry tuuboyinka & tubbo-saareyaasha iyo shirkado
Rubber Stator Iyo Rotor Of ...
Polyurethane tubbada birta ah waa shey dhuunta u adkeysata oo sarreeya, oo si ballaaran loogu adeegsado dhuumaha wax soo saarka macdanta iyo dhuumaha dhuumaha gudbinta. Saldhigga tamarta shidaalka waxay u adeegsataa dhuunta dhuxusha iyo nidaamyada ka saarista dambaska, iyo sidoo kale saliidda, kiimikada, sibidhka iyo warshadaha miraha. Astaamaha 1. Xidho u adkaysta 2.Ka hortagga Miisaanka 3.Cudurka iska caabinta 4. U adkaysiga gabowga hydrolysis 5. dabacsanaanta sare 6. U adkaysiga naxdinta farsamada 7. Arex is-saliidaynta ayaa doorata goobta ...
Dabacsan Rubber Rubber tubbo
Tuubbada jilicsan ee jilicsan ee jilicsan ayaa lagu daro NR, BR iyo SBR caag synthetic ah. Waxay adeegsanaysaa dhar adag oo xoog leh oo giraan bir ah leh sida qalfoof xoojin ah. Tuubbada jilicsan ee jilicsan ayaa had iyo jeer lagu dhejiyaa inta u dhexeysa bamka iyo jarjarka qashinka, kaas oo qaada culeys shaqo oo xun inta lagu gudajiro habka nuugista. Tuubbada jilicsan ee jilicsan & Tuubbada gaashaaman, oo leh giraan bir bir ah oo gudaha ku jirta, ayaa ku habboon wareejinta slurries xoqan, dhirta wax soo saarka macdanta, t ...
Tuubbada caagga ah ee dhoobada dhoobada ah waxay u adeegsaneysaa xaalad aad u dagaal badan halka tuubbada caagga ah ee aan caadiga ahayn ay u baahan tahay beddel joogto ah. Sidoo kale, tuubbada caagga ah ee dhoobada dhoobada ah ayaa lagu rakibi karaa nooc ka mid ah mashiinnada gariirka ama qaar ka mid ah qalabka aan taagnayn. Waxay kordhin kartaa xulashada injineerada iyadoo si ballaaran loo wajahayo rakibidda iyo howlgalka. Astaamaha 1. Xidho iska caabbinta Iska caabbinta tuubbada caagga ah ee dhoobada dhoobada leh ayaa 10 jeer ka sarreeya tan tuubbada birta caadiga ah ...
Dhuumaha birta ah ee safka kujira
Dhuumaha birta ah ee caagga ah ayaa loogu talagalay in loo isticmaalo codsiyada bamgareynta xoqidda ee kala duwan. Araajida sida dheecaanka mashiinka, bambooyin cadaadis sarreeya, khadadka dhaadheer ee dhaadheer, dalbashada codsiyada bamka slurry iyo tuubooyinka cuf isjiidadka. Dhammaad kasta oo leh shaabad caag ah oo jilicsan oo jilicsan. Xiro u adkaysta iyo daxalka u adkaysta iyo daxalka u adkaysta tuubooyin bir ah oo bir ah ayaa laga sameeyay birta guud ee birta ah iyada oo loo adeegsanayo qaab dhismeedka iyo iyadoo la adeegsanayo sifooyin aad u wanaagsan oo caabbinta u adkaysta, daxalka u adkaysta iyo caagga kuleylka u adkaysta sida ...